အင်တာနက်ချိတ်ဆက် ပစ္စည်းများ - ဝီကီပီးဒီးယား
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများ (အိုင်အိုတီ) ကို ပုံဖော်ထားသော ရုပ်ပုံ
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများ (Internet of Things သို့ IoT) ဆိုသည်မှာ ရုပ်ဝတ္ထုကိရိယာများ၊ ယာဉ်များ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြားသော အီလက်ထရွန်းနစ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ ဆင်ဆာများ၊ အကျုရေတာများ နှင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုတို့ ပါဝင်သော ကိရိယာများကို ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ယက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး အချက်အလက်များကိုလည်း ဖလှယ်နိုင်ကြ၍  ရူပကမ္ဘာအား ကွန်ပျူတာအခြေခံစနစ် အတွင်းသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းပိုဖြစ်စေကာ လုပ်နိုင်စမ်းပိုကောင်းလာခြင်း၊ စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် ပိုရှိလာစေခြင်းနှင့် လူတို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို လျှော့ချနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အိုင်အိုတီ ကိရိယာများသည် တစ်နှစ်လျှင် ၃၁% မျှ တိုးတက်နေရာ ၂၀၁၇ တွင် ၈.၄ ဘီလီယံ အထိ ရှိလာခဲ့ပြီး  ၂၀၂၀တွင် ကိရိယာပေါင်း ဘီလီယံ ၃၀ အထိ ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ အိုင်အိုတီ၏ တကမ္ဘာလုံး ဈေးကွက်တန်ဖိုးသည် ၂၀၂၀ တွင် ၇.၁ ထရီလီယံ အထိ ရောက်ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ 
↑ Internet of Things A to Z: Technologies and Applications (in en-us) (2018-06-13)။
↑ Brown၊ Eric (13 September 2016)။ Who Needs the Internet of Things?။
↑ Brown၊ Eric (20 September 2016)။ 21 Open Source Projects for IoT။
↑ Internet of Things Global Standards Initiative။ ITU။
↑ Internet of Things: Science Fiction or Business Fact? (November 2014)။ 23 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Trouble with the Internet of Things။ Greater London Authority။ 10 August 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vermesan၊ Ovidiu; Friess၊ Peter (2013)။ Internet of Things: Converging Technologies for Smart Environments and Integrated Ecosystems (PDF)။ Aalborg, Denmark: River Publishers။ ISBN 978-87-92982-96-4။
↑ Santucci၊ Gérald။ The Internet of Things: Between the Revolution of the Internet and the Metamorphosis of Objects။ 23 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ From the Internet of Computers to the Internet of Things။ 23 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lindner၊ Tim (13 July 2015)။ The Supply Chain: Changing at the Speed of Technology။ Connected World။ 22 August 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Große internationale Allianz gegen Cyber-Attacken
↑ Nordrum၊ Amy (18 August 2016)။ Popular Internet of Things Forecast of 50 Billion Devices by 2020 Is Outdated။ IEEE။
↑ Hsu, Chin-Lung (2016). "An empirical examination of consumer adoption of Internet of Things services: Network externalities and concern for information privacy perspectives". Computers in Human Behavior 62: 516–527. doi:10.1016/j.chb.2016.04.023.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်တာနက်ချိတ်ဆက်_ပစ္စည်းများ&oldid=730275" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၆:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။